Echiche nke ụbọchị Kildare nwere ihe dị iche - IntoKildare
di na nwunye, Ihe Zoro Ezo, Ihe Ime
Nri abalị na-amụnye kandụl, otu rose na-acha ọbara ọbara, balloons nke nwere obi-nọ ebe ahụ, mee ya! Kedu ihe kpatara na ị gaghị eme mmemme ụbọchị Valentine dị iche iche n'afọ a, yana aro ndị a sitere n'ime Kildare.
Nweta Arty V-Day a
Ị na -achọ ihe dị iche kpamkpam iji kaa akara ịhụnanya a? Na -ewebata klọb Paint na Carton House! Ihe omume mmekọrịta pụrụ iche na nke okike, Paint Club ga -eme na Manor House of Carton nwere onye na -ese ihe dị n'aka iji nyere gị aka ịmepụta ọkaibe nke gị.
Agba agba emebere maka onye ọ bụla, na -enweghị ahụmịhe dị mkpa! A ga -enye ihe niile, kwaaji, eserese, ihe nhicha, brushes, apron, naanị ihe ị chọrọ bụ onwe gị na oke ịnụ ọkụ n'obi!
Ma ị bụ onye omenkà guzobere ma ọ bụ onye mbido zuru oke, mee ihe okike gị wee soro Paint Club nwee ntụrụndụ na Carton House.
Maka ndị di na nwunye dị n'èzí
Mbipụta nke Abbeyfield Farm (@abbeyfieldfarm) kesara
Kedu ihe ihunanya karịa ịpụ na ikuku ikuku nke ime obodo Kildare mara mma na ịnụ ụtọ ọmarịcha n'èzí?
Na -emeso onye ị hụrụ n'anya otu ụbọchị na Abbeyfields Country Pursuits na ụta nduru ụrọ, egbe égbè ikuku, ụta ụta na ebe ịnyịnya. Nri maka obere oriri site na mmadụ abụọ ruo asaa, nke a bụ ụbọchị Valentine zuru oke maka ndị di na nwunye a na -apụ apụ na -achọ ụbọchị nwere ọdịiche.
N'ịbụ nke dị ihe karịrị hekta 240 nke ọmarịcha obodo Kildare, Abbeyfield erughị nkeji iri abụọ site na Dublin's M20.
Were onye ị hụrụ n'anya banye na mmiri
Mbipụta nke Ger Loughlin (@bargetrip) kesara
Kedu ihe ihunanya karịa njem ụgbọ mmiri dị larịị nke na -awagharị na -aga na ọwa mmiri Kildare?
Hapụ ụwa ndị ọzọ ka ị na -agbada n'ụgbọ mmiri wee were nwayọ nke mmiri na -agafe ọdịdị mara mma n'akụkụ mmiri.
Bargetrip.ie charter ụgbọ mmiri nkeonwe n'akụkụ ọwa mmiri, yana champeenu na tii ehihie, yana nhọrọ nke sandwiches, scones, achịcha siri ike na tii. Ụgbọ mmiri a na -ekpo ọkụ ma nwee ntụsara ahụ na stovu na -ere ọkụ, egwu dị nro n'azụ na oche dị n'èzí ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịpụ n'èzí.
Nweta ịgba ịnyịnya na V-Day a
Brallistown obere, Tully
Mbipụta nke Irish National Stud & Gardens (@irishnationalstudandgardens) kesara
Mmetụta ụbọchị gị buru oke ibu na njem gaa na Irish National Stud na Gardens. Enweghị oge ka mma karịa ugbu a ịga leta ebe a na -emepe Stud ọhụrụ maka 2019, wee jupụta na nwa amụrụ ọhụrụ mara mma ka ọ gafee!
Gaa mkpagharị ịhụnanya site na ogige ndị Japan ma nwee mmasị na akụkọ ndụ ndị na -akpọ Irish Stud paddocks n'ụlọ.
Ụlọ oriri na ọ Gardụ Gardụ ndị Japan bụ ebe zuru oke iji nwee ọmarịcha nri ehihie izu abụọ, yana nri dị mfe ma dị mma na -emesi ike na ịdị ọhụrụ na ụtọ.
Maka ndị hụrụ anụmanụ n'anya
Mbipụta nke Kildare Farm shop & Open Farm (@kildarefarmfoods)
Ọ bụrụ na Valentine gị na -eme nzuzu maka ndị enyi na -ewe iwe, banye na ezigbo akwụkwọ ha ma hazie ụbọchị nri nri Kildare na Febụwarị 14!
N'ịbụ nke jupụtara na anụ na-atọ ọchị, nnukwu na obere, nri Kildare Farm bụ ụbọchị ezumike zuru oke maka ndị di na nwunye ahụ na-achọ ụbọchị izu ike, dị mfe. N'ugbo, ị nwere ike ịhụ wallabies, enyí nnụnụ, alpacas, mara, ezi, ewu, ponies, mgbada, atụrụ na ndị ọzọ!
Chefuo nri mara mma na mmanya dị oke ọnụ, gịnị ma ị rie nri ehihie na -atọ ụtọ na Tractor Cafe!
Onyinye nke Ọsọ
Biputere Mondello Park (@mondellopark) kesara
Nye ya ụbọchị Valentine iji cheta afọ a na njem Mondello Park! Ebe mgbakọ mba ụwa na -enye gị ohere ịdekọ ahụmịhe ịgba ọsọ na nnukwu ụgbọ ala maka onye ị hụrụ n'anya - nke ga -emeri gị onyinye onyinye afọ ofufo!
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị ịnọdụ ala wee kirie ihe nkiri, Mondello Park na -akwado mmemme ezumike ezumike ezumike na February 16th na 17th.
Daysbọchị abụọ nke oge egwu oge niile, nhazi anọ dị nzuzu, asọmpi ikikere ikike ikike ịkwọ ụgbọ ala nke 2019, Drift Games Extreme ụgbọ ala na-ekpughe, ịnya ndị njem na ihe ịkpafu karịa ka mmadụ nkịtị nwere ike ijikwa-nke a bụ n'ezie ụbọchị V-Day kacha mma. KWA maka onye hụrụ ụgbọ ala n'anya na ndụ gị.
Biputere Lullymore (@lullymoreheritagepark)
N'ịbụ onye Failte Ireland na Ancient East nke Ireland kwadoro, Lullymore Heritage Park bụ nhọrọ pụrụ iche na ihe ọchị iji weta onye pụrụ iche n'ụbọchị Valentine'spo a!
Chọpụta akụkọ ihe mere eme nke Lullymore, nyochaa ihe nzuzo na akụkọ nke peatlands, ma gaa n'okporo ụzọ dị egwu na ọdọ mmiri ndị a pụrụ ịhụ n'ime oke ọhịa Lullymore.
Enwekwara nnukwu cafe na ụlọ ahịa maka ịta ata ka ọ rie na saịtị yana ọtụtụ ebe egwuregwu maka iri nri n'èzí. A na -adọba ụgbọala n'efu.
di na nwunyeIhe Zoro EzoIhe Ime